Maxaa Sababa Kacsiga Badan Sideese Loo Maareyn karaa?" - Banaadirsom | Banaadirsom
Maxaa Sababa Kacsiga Badan Sideese Loo Maareyn karaa?”
Jun 16, 2019 - Aragtiyood
Kacsiga badan waxa uu saameyn ku yeelan karaa nolol maalmeedkaaga iyo xiriirkaaga. Dad waxaa jira saacad kasta ka fikiraya galmada, iyagoo waqti badan ku lumiya daawashada filimaanta qaawan iyo siigada. Qaasatan waxa uu kacsiga badan dhib weyn ku hayaa ragga iyo dumarka doobka ah.
Xitaa kuwa guursaday ayaa dhibaato ku qaba haddii lamaanuhu aysan ka sinayn kacsiga. Ninka ayaa laga yaabaa in aysan ku filnayn inta goor uu u galmoodo gacalisadiisa, taasoo keeni karta qataro badan iyo ugu dambeyntii in ay horseedo burburka qoyska.
Maxaa sababa kacsiga badan?
Waxaa la aaminsanyahay in kacsiga badan uu xiriir la leeyahay caafimaadka oo laga yaabo in qofka caafimaad ahaan ay wax ka qaldanyihiin. Waxaa laga yaabaa qofka in aysan isku dheeli tirnayn hormoonkiisa ama uusan xakameyn karin baahidiisa. Cudur ma ahan caafimaadka aan ka hadlayno balse qofka nidaamkiisa jirka ayaa wax ka qaldanyihiin.
Sidoo kale waxaa jira dad kacsiga badan ay ku dhaliso isbedal xaga nolosha ah ama jirka ah. Dadka qaar ayaa la sheegaa qaasatan dumarka in kacsigu ku siyaadi karo marka ay uur yeeshaan oo umusha ka dib. Dumarka qaar ayaa la ogyahay in marka ay caadadu ku dhacdo iyo maalmaha ka dambeeya ay aad u kacsi badanyihiin. Waxaa sidoo kale la sheegaa in dadka iyaga oo caruur ah lagu xadgudbay sida dadka la kufsaday laga yaabo in ay marka ay weynaadaan ay kacsi badan la yimaadaan.
Lama cadeyn kara sababta qof uu kacsigu ugu badanyahay oo xaalada shaqsi walba waa ka duwantahay kuwa kale.
Sidee loo maareyn karaa kacsiga badan?
Horta su’aasha muhiimka ah ayaa ah: Waa maxay kacsi badan? waxaa laga yaabaa in kacsigaaga uu caadi yahay. Balse waxaa jira dhowr su’aalood oo haddii jawaabtoodu noqoto HAA ay u badantahay in kacsigaaga uu xad dhaaf yahay:
Kacsigaaga badan ma keenaa in aad ka fikirto galmada waqti kasta?
Maalin kasta miyaa siigaysataa?
Filimaanta qaawan miyaa joogto u daawataa?
Shaqada iyo hawlaha kale ee nolosha miyaa kaga mashquushaa fikirka galmada?
Kacsigaaga badan ma arin cusub baa mise waa mid aad horay isugu ogeyd?
Xaaskaaga cadaadis ma maku saartaa galmada? oo iyada oo aan xiiso qabin maku cadaadisaa?
Marka aad galmada samaynayso ma sameysaa nuucyada galmada oo qatar ah ama xad dhaaf ah?
Galmada ama siigada ka dib, maxaa dareentaa? ma dareentaa xumaan iyo shalaay?
Su’aalahaas haddii inta badan aad ugu jawaabto haa, kacsigaaga waxaa laga yaabaa in uu qatar ku yahay noloshaada. Hadaba sidee ayaad u mareyn kartaa kacsiga badan?
Waxaa jira dhowr arimood oo aad samayn karto. Haddii aad ku nooshahay wadamada hormaray waxaad la kulmi kartaa dhaqtar ku taqasusay arimaha galmada oo laga yaabo in uu talo kaa siiyo. Sidoo kale waxaa la xaqiijiyay in jimicsiga iyo isboortiga ay hoos u dhigaan kacsiga badan. Isku day in aad bilowdo jimicsi sida orodka, in aad jiim gasho iwm. Xitaa cuntada aad cunto ayaa laga yaabaa in ay saameyn ku leedahay kacsiga badan.
Ugu dambeyntii waxaa xasuus mudan in kacsiga guud ahaan uu yahay mid caafimaad ah, oo ragga iyo dumarka aaan kacsan karin ay dhibaato ku qabaan nolosha. Balse sidoo kale waxkasta kuma fiicna in laga badiyo.
© 2019 Banaadirsom - All rights reserved.
Designed By: Banaadirsom.